Autopilot na-ebupụta Insights, Onye Ahịa njem Tracker maka Ahịa | Martech Zone
82% nke ndị ahịa kwụsịrị na-azụ ahịa na a ụlọ ọrụ na 2016 mgbe a ọjọọ ahụmahụ dị ka Mary Meeker kacha ọhụrụ Akụkọ Internetntanetị. Enweghị data na nghọta nwere ike igbochi ndị na-ere ahịa ịga n'ihu na ọrụ ha: data ọhụrụ na-egosi na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa anaghị enwe data na nchịkọta ha kwesiri inyocha arụmọrụ ha, na 82% kwuru nke ka mma nchịkọta ga-enyere ha aka inwe ọganihu n'ọrụ ha.
Autopilot na-ebupụta nghọta
Autopilot ulo oru Nghọta - onye nlere anya na-ahụ maka ndị ahịa na-enyere ha aka ịtọ, egwu, ma nweta ihe mgbaru ọsọ. Nghọta na-ahụ ihe mgbaru ọsọ a kapịrị ọnụ na usoro akara dị mkpa (ntinye aka email, nnabata ihe omume, wdg), iji kpughee ozi na ọwa na-arụ ọrụ, ndị Microsoft Developer Group jikwa ya mee ihe tupu afọ ha Kwu Nzukọ iji soro ma zute ihe mgbaru ọsọ ha.
Nghọta na-enye ndị ahịa ohere ịlele ma soro arụmọrụ nke njem ndị ahịa ha megide ebumnuche, dị ka ngwa nsuso ahụike. N'ime 60 sekọnd, ndị na-ere ahịa nwere ike soro ọwa mmeri, metrik, na ozi dị mkpa iji gbanwee ego ha ga-enweta ma bulite maka ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
N'ime 700 Autopilot ndị ahịa sonyere na nyocha nke oge mbụ nke Insights, ihe karịrị ọkara na-ekwu na Insights nyeere ha aka ịbawanye arụmọrụ njem, na pasent 71 kwuru na ha nwere obi ike ugbu a na mmetụta nke ahịa ha.
Na Insights, enwere m ike ịbanye n'ime obere nke usoro ọ bụla na njem anyị ma bulie ihe na-arụ ọrụ. Ọ dị ezigbo mma ijikọ uto nke na-apụta na ngalaba ahịa anyị azụ na njem nlegharị anya na Autopilot. Kevin Sides, CMO nke Hipgbọ mmiri
Ike Nghọta Isi Gụnye
Ntugharị ọsọ: Ihe omuma enyere aka ichikota ndi otu gburugburu ebumnuche ahia di nkpa site na ikwe ka ndi oru ohere meputa, nweta, ma kesaa ebumnuche mgbanwe njem ha na ntinye ole na ole.
Usoro mgbanwe: Echefula mgbe niile na ihe mgbaru ọsọ njedebe - ntụgharị. Nyochaa usoro mgbanwe wee hụ onye, ​​na otu ọsọ ọsọ, mmadụ tụgharịrị gafee ọwa ọ bụla site na email gaa na akwụkwọ ozi.
Nchịkọta ozi email: Hụ otu ozi ịntanetị gị na-eme ma na-agagharị na mpịakọta, ọkwa-njem. Chọpụta oge dị mkpa na ụbọchị nke izu iji zipu ozi ịntanetị site na ilele nsonaazụ dị na nkwalite dị iche iche, ọbụnakwa dị omimi dị ka arụmọrụ larịị kwa awa.
Chọpụta ozi mmeri: Dọrọ n'ime otu, ozi ọtụtụ ozi na-arụpụta kwa ụbọchị. Jiri nyocha A / B tụnyere ngwa ngwa ma chọpụta ndị mmeri.
Autopilot bụ sọftụwia ire ahịa anya maka akpaghị aka njem ndị ahịa. Site na njikọta nke ala na Salesforce, Twilio, Segment, Slack, na Zapier yana ikike ijikọ ihe karịrị 800 e ji arụ ọrụ ebumnuche, anyị na-enye ndị na-ere ahịa ume ịzụlite mmekọrịta ma bulie ndị ahịa na-akwụ ụgwọ dị elu site na iji email, weebụ, SMS, na ọwa ozi mail. .
Tags: Analyticsautopilotnjem ndị ahịaahịa njem nsusoozi ịntanetịịghọtandị ahịankeslackTwilioike